Sidaas waa tan &nbsp; ay ahayd in la eryey? Tan iyo hagaajinta ugu dambeeyay, Anigu waxaan u arka qayb ka mid ah fursadaha Translation ku on dhamaadka hore, sababta?
April 27, 2013 at 12:13 at the
Ma Waa in aad ka arki in xagga hore ee goobta, haddii aad ku aragtid fadlan nala soo xiriiri karaan si toos, iyo waxaan arki doonaa waxa sababa this.
May 31, 2013 at 9:20 at the
Aniga ahaan, version waa mid aad user-friendly, Anigu ma doonayo in la beddelo si kale wixii.